ခရီးသွားနေ-လျှပ်စစ်စကိတ်၏သစ်ကာလ - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
အများအားဖြင့်, သူတို့ကိုတင်ဆောင်လာသောအဆိုပါစကိတ်၏အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်ကြောင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျာမဏီအခြေစိုက်အများစုန်ထမ်းများတာရှည်ဥရောပအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောလူအပေါင်းတို့နိုင်ငံများတွင်အမှန်တကယ်ဂျာမနီမှာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးအစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်ထားတဲ့ "လျှပ်စစ်-Mobile" အကြောင်းကိုစပ်စုခဲ့သညျ။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုတက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဖြစ်ထိရောက်စွာချုပ်-ထစ်ဝယ်အကူအညီနဲ့ပူဇော်နှငျ့သငျတဲ့မော်ဒယ်သစ်ကိုဝယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရေရှည်မှာတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ဖြစ်စေမအလုပ်လုပ်! လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်တစ်ဦးထုပ်အဖြစ်သင့်ဒေသခံစည်းမျဉ်းကိုအားကိုးသည်အခြားလက်ခံနိုင်ဖွယ်လုံခြုံရေးဂီယာ (ဥပမာဝတ်ဆင်စီးနင်းအခါ, သင်တစ်ဦးထုပ်ပေါ်တွင်တင်ရမယ်လိမ့်မယ်။ တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အကူအညီများလိုအပ် လျှပ်စစ်စကိတ်စီး? KOOWHEEL Drive ကိုမဆိုလှည့်ကျတဲ့ mountable လျှပ်စစ် drive ကိုဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးသို့ပုံမှန်အစည်းအဝေးစကိတ်စီး လျှပ်စစ်စကိတ်စီး - အတွင်း၌မိနစ်။ သင်ကတိုင်း 10 မိနစ်အားသွင်းစရာမလိုဘဲအံ့မခန်းအကွာအဝေး cowl ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကွာအဝေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကအကွာအဝေးဟာပိုကြီး, မြင့်မားသည်ဟုဆိုထွက်နှင့်အတူတတ်၏။ သငျသညျသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဘဏ္ဍာရေးထုံးစံရှာဖွေနေသို့မဟုတ်ပဲပျော်စရာလိုအပ်လျက်ရှိသည်အမှု၌အရေးမပါနဲ့, အ Koowheel Cruiser သငျသညျစကိတ်စီးခြင်း၏အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးအပေးပါလိမ့်မယ်။
Koowheel Cruiser ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုများစွာသောအခြားလျှပ်စစ်စကိတ်ထက်လျော့နည်းသောတန်ဖိုးရှိ, စဉ်းစား, တစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာအဖြစ်ကဒီမှာရတယ်။ အဆိုပါ Koowheel မော်တာ၏ဒါ့အပြင်ဝါကြွားတတ်သိကျွမ်း-ဘယ်လိုအရာ brushless ရဲ့တစ်လက်ကိုင်ဝေးလံသော controller ကိုအသုံးချဖို့ operated ဖြစ်ပါတယ်။ အစားထိုးအဖြစ်, ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဘာသာစကားအစိုးရများကသူတို့အထူးသဖြင့်လူတစ်ဦးမြို့များအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုခွင့်ပြုရန်ရှိမရှိသို့မဟုတ်မဆုံးဖြတ်ရန်အခွင့်အာဏာပေးစွမ်းသည်။ Koowheel မြို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများပရိတ်သတ်များအဘို့အချုပ်အရည်အသွေးနှင့်အလွန်အကျွံစွမ်းဆောင်ရည်လျှပ်စစ်စကိတ်ဒီဇိုင်း။ Koowheel တစ်ဦးရရှိ လျှပ်စစ်စကိတ်စီးမသိမမြင်နိုင်သောတန်ဖိုးရှိနှင့်တတ်နိုင်ကုန်ကျစရိတ်မှာတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အာမခံချက်အတူ။ တစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျမကြာခဏကျနော်တို့ကိုမကျင့်ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်း - ငါအန္တရာယ်များကိုယူပြီးများ၏တန်ဖိုးရှိအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ပေါ့။ သငျသညျ Impulse တစ်ဦးအချည်းနှီးစကိတ်စီးနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတှေ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအသငျသညျ, ဘက်ထရီဒီဂရီစောင့်ကြည့်ဖို့နိုင်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်စကိတ်စီးကိရိယာများ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်မော်တော်စကိတ်စီး, အရှိန်နှင့်ဘရိတ်များအတွက် Controller, အဓိက mounting ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ဘက်ထရီအားသွင်းများအတွက် charger ကို powering များအတွက်ဘက်ထရီဖြစ်ကြသည်။
နှစ်ခုအရေးကြီးသောမော်တာမျိုးပေါင်းဤနေရာတွင်စဉ်းစားရန် In-ဘီးအချက်အချာမော်တာသို့မဟုတ်ခါးပတ်တွန်းသူတွေကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်စကိတ်စီးပစ္စည်းများဤလုပ်ငန်းစဉ်ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ကူညီပေးပါမည်။ ပုံမှန်အားလျှပ်စစ်စကိတ်နှင့် On-လမ်းပေါ်လျှပ်စစ်စကိတ်ရှိပါတယ်။ ငါ့အပူဆုံးနှင့်အများဆုံးကြည့်ရှုရေးသားချက်များအကြားတစျခုဖွစျသညျသွားရမည်အကြောင်း, လူတွေအများကြီးချို့တဲ့အချို့တကယ်ကောင်းတဲ့ပျဉ်ပြားရှိခဲ့ဘူးသောတုံ့ပြန်ချက်ထဲမှာပြောတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုခံခဲ့ရသောအင်ဂျင်များနှင့်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ကထုတ်လုပ်ဆူညံသံ: မည်သို့ပင်ဆိုစေခြင်း, ဓာတ်ဆီစွမ်းအင်သုံးစကိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအပြီးအဲဒီမော်တော်ဘုတ်များကဲ့သို့ပိတ်ပင်ထားရစေသောအရာကောင်းတစ်ဦးအနည်းငယ်အကြောင်းတရားများရှိခဲ့ပါပြီ။
အလွန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ၏လိုက်စား အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်စကိတ်စီး ထွက်တွေ့ရှိရန်ဆန္ဒရှိဆက်လက်? KOOWHEEL စကိတ် မရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးစွမ်းအင်ဘော်ဒါအတှေ့အကွုံတဦးတည်းတင်ပို့ရန်တစ်ခုတည်းသောစကိတ်၏ဂန္စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အတူအလွန်အကျွံအားကစားလှုပ်ရှားမှုများ၏အတိမ်အနက်ကိုရောမွှေ! အခုအချိန်မှာငါနေ့စဉ်အသုံးပြုရန် 10 အကြီးမြတ်ဆုံးစကိတ်, ငါ့အမြင်ရှိသယ်။ top-of-the-line ကို 2018 ဘို့ထုတ်လုပ်သူပြန်လည်သုံးသပ် Koowheel ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်မြန်နှုန်း 30km / h ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း 45km / h ကမ်းလှမ်း, ပိုမြန်သွားပါနှင့်သင်တဦးတည်းဘက်ထရီအားသွင်းနှင့်အတူတစ်ဝှမ်း 20 မှ 25 ကီလိုမီတာကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်။ ပစ္စုပ္ပန်ဘက်ထရီ 20pcs18650 မြင့်မားမှုနှုန်းလီသီယမ်ဆဲလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။